Hello Nepal News » हल्यान्ड ताक्नेलाई डर्टमुन्डले तोक्यो मूल्य : सुन्दा पत्याउनै मुस्किल !
हल्यान्ड ताक्नेलाई डर्टमुन्डले तोक्यो मूल्य : सुन्दा पत्याउनै मुस्किल !
आफ्ना गोल मेसिन युवा खेलाडी अर्लिङ हल्यान्डमाथि नजर लगाइरहेका युरोपका ठूला र धनी क्लबहरूका लागि जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्डले छुनै नसकिने मूल्य तोकेको छ । जर्मनीको चर्चित पत्रिका ‘बिल्ड’मा प्रकाशित ताजा रिपोर्टअनुसार डर्टमुन्डले हल्यान्डका लागि २५० मिलियन युरोको ‘प्राइज ट्याग’ तोकेको छ । यस साइजमा अफर आए छलफल गर्न सकिने क्लबले बताएको छ । क्लबका खेलकुद निर्देशक सेबास्टिएन केहलले यसबारे बताएका छन् । हाल मात्रै २० वर्षका हल्यान्डका लागि क्लबले चाहेको वा माग गर्ने यो मूल्य अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि क्लबले तिर्न नसक्ने मूल्य नै हो ।
‘हामीलाई थाहा छ– हल्यान्डमाथि केही ठूला क्लबको नजर छ । उनीहरू हाम्रा खेलाडीलाई चाहन्छन् । तर, आजसम्म कुनै पनि क्लबबाट हाम्रो टेबलमा औपचारिक प्रस्ताव आइपुगेको छैन । बाहिर धेरैखाले चर्चा रहेको बारेमा पनि हामीलाई थाहा छ । बाहिरका चर्चाका आधारमा केही बोल्न सक्दैनौं,’ डर्टमुन्डका खेल निर्देशक केहलले ‘बिल्ड’सँगकुरा गर्दै भनेका छन्, ‘अहिले बजारमा सबैभन्दा उच्च माग भएका खेलाडी हामीसँग हुनु हाम्रा लागि राम्रो हो । हामीले हल्यान्डलाई बाहिर पठाउने विषयमा सोचेका छैनौं । यदि आधारिक प्रस्ताव आयो भने त्यो छलफलको विषय बन्ला । अहिलेको सरुवा बजारमा उनी २५० मिलियन (युरो) का खेलाडी हुन् ।’
रिपोर्टअनुसार लगातार आफ्ना खेलाडीमाथि ठूला क्लबले नजर बढाएपछि जर्मन क्लबले हल्यान्डलाई नबेच्ने सोचका साथ महँगो मूल्य कायम गरेको दाबी गरिएको छ । ‘डर्टमुन्डले २० वर्षका हल्यान्डका लागि २५० मिलियन युरोसम्मको प्रस्तावमा छलफल गर्न सकिने बताएर हल्यान्ड बिक्रीमा छैनन् भनेर स्पष्ट सन्देश दिन खोजेको छ । यो बार्सिलोना वा रियल मड्रिडजस्ता क्लबहरूलाई रोक्ने उपाय हो ।’ प्रकाशित ‘बिल्ड’को रिपोर्टमा भनिएको छ । डर्टमुन्डले हल्यान्डमाथि अन्य क्लबको प्रस्ताव रोक्न महँगो मूल्य तोकेको बताइएको छ । यदि क्लबको यही अडान हो भने हल्यान्डलाई युरोपका जस्तै धनी क्लबले पनि अहिलेकै समयमा किन्न आँट गर्नेछैनन् ।
नर्वेका गोल मेसिन खेलाडी गत समर सिजनमा अस्ट्रियन क्लब रेड बुल साल्जवर्गबाट डर्टमुन्ड पुगेका थिए । उनलाई डर्टमुन्डले अप्रत्यासित रूपमा मात्रै २० मिलियन युरोमा अनुबन्ध गरेको थियो । जर्मनी पुगेपछि नै हल्यान्ड निकै शानदार लयमा खेलिरहेका छन् । उनले हालसम्म डर्टमुन्डका लागि कूल ४८ खेलबाट ४७ गोल गरेका छन् । जारी सिजन उनले बुन्डेसलिगामा २० खेलबाट १९ गोल र च्याम्पियन्स लिगमा मात्रै ८ खेलबाट १२ गोल गरेका छन् । उनी च्याम्पियन्स लिगमा सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् भने बुन्डेसलिगामा बार्यन म्युनिखका रोवर्ट लेवान्डोस्कीलाई पनि पछ्याइरहेका छन् ।
🚨| Real Madrid believe that the €250M price tag by Dortmund is only to dissuade other clubs from opening talks with Haaland, because they want to keep him. His real price will be much lower. @jpedrerol #rmalive
एक वर्षअघि मात्रै २० मिलियन युरोमा अनुबन्ध भएका हल्यान्डलाई डर्टमुन्डले एक वर्षपछि नै २५० मिलियन युरो मूल्य तोकेर हल्यान्ड ताकिरेहका ठूला क्लबहरूलाई ठूलो झट्का दिएको छ । पछिल्लो समय हल्यान्डका लागि स्पेनिस क्लब बार्सिलोना गम्भीरतापूर्वक लागेको छ । नयाँ अध्यक्षले सार्वजकि रूपमा हल्यान्ड अनुबन्धका लागि आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । उता, स्पेनकै रियल मड्रिड पनि हल्यान्डमाथि नजर बनाएर बसिरहेको छ । यदि फ्रेन्च क्लब पिएसजीबाट केलियन एमबाप्पे भित्र्याउन नसके रियलले दोस्रो विकल्पमा हल्यान्डलाई राखेको छ ।
हल्यान्ड वर्तमान समयमा सर्वाधिक माग भएका खेलाडी हुन् । भर्खरै करिअर सुरुआत गरेका उनलाई भित्र्याएर लामो समयसम्म टोलीमा एक खतरनाक गोल मेसिन खेलाडी सुरक्षित गर्न युरोपका सबैजसो ठूला क्लब लागेका छन् । अहिले नै हल्यान्ड भित्र्याउने क्लबलाई कम्तीमा १२ वर्ष ढुक्क हुन्छ । अहिले बार्सिलोना र रियल मड्रिडबाहेक हल्यान्डमाथि प्रिमियर लिगका म्यानचेस्टर सिटी, लिभरपुल, चेल्सीले पनि नजर लगाइरहेका छन् । तर, सबैभन्दा दाबेदार भनेका बार्सिलोना र रियल मड्रिड नै हुन् । त्यसमा पनि कप्तान लिओनल मेस्सीले क्लब छाड्ने भएपछि समस्यामा पर्न लागेको बार्सिलोना मेस्सीको अभाव टार्न कुनै पनि हालतमा हल्यान्ड भित्र्याउन चाहन्छ ।
उता, बार्सिलोनाकै कट्टर प्रतिस्र्धी रियलले आगामी समर सिजनमा पहिलो प्राथमिकतामा भने फ्रेन्च क्लब पिएसजीका एमबाप्पेलाई राखेको चर्चा छ । यदि विविध कारणले एमबाप्पे भित्र्याउन नसके उसले पनि हल्यान्डलाई ताकेको छ । संयोग यस्तो छ कि, हल्यान्ड र एमबाप्पे दुवैजना रियलका पूर्वखेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोबाट प्रेरित छन् । र, दुवैले रोनाल्डोले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो आइडल मान्छन् । यी दुवै खेलाडीले रियलमा गएर आफ्ना आइडल रोनाल्डोको स्थान लिने अवसर छ । उनीहरूले भविष्यमा रोनाल्डोले लगाएको आइकनिक ७ नम्बर जर्सी समेत पाउने नै छन् । वर्तमान फुटबल जगतमा हल्यान्ड र एमबाप्पे सबैभन्दा ठूलो बजार भाउ भएका खेलाडी हुन् ।
🚨 [El Chiringuito TV – @jpedrerol🥉] | Dortmand wants €250 million for Haaland pic.twitter.com/8sK1ZT0PgV
— BarçaTimes (@BarcaTimes) March 19, 2021
फुटबलसँग सम्बन्धित चर्चित संस्था ‘ट्रान्सफर मार्केट’का अनुसार विश्वकप विजेता समेत रहेका फ्रान्सका २२ वर्षका एमबाप्पेको मार्केट भ्यालु १८० मिलियन युरो रहेको छ । यता, २० वर्षका नर्वेका हल्यान्डको हालको मार्केट भ्यालु ११० मिलियन युरो रहेको छ । हल्यान्ड एमबाप्पेभन्दा २ वर्ष कान्छा छन् । दुवै खेलाडी फ्रन्ट लाइनमा खेल्ने गोलकर्ता खेलाडी हुन् । तर, शारीरिकदेखि अन्य प्राविधिक हिसाबले पनि हल्यान्डलाई एमबाप्पेभन्दा पूर्ण मान्ने गरिन्छ । किनभने, हल्यान्ड हेडिङ गोल (एयर बल) मा क्रिस्टियानो रोनाल्डोजत्तिकै असरदार खेलाडी हुन् ।
एमबाप्पे र हल्यान्डको व्यक्तिगत तथ्यांक हेर्दा युरोपियन लिग फुटबलमा एमबाप्पेभन्दा हल्यान्ड ज्यादा प्रभावशाली मानिन्छन् । एमबाप्पेले हालसम्म सिनियर टोलीका लागि दुई क्लबमा सबैखाले प्रतियोगिता गरी कूल २१९ खेलबाट १४५ गोल गरेका छन् । यता, २ वर्ष कान्छा हल्यान्डले सिनियर टोलीका लागि दुई क्लबबाट हालसम्म कूल ७५ खेलबाट ७६ गोल गरेका छन् । हल्यान्डले खेलेका खेलभन्दा बढी गोल गरेका छन् । यता, राष्ट्रिय टोलीको कुरा गर्दा एमबाप्पेले फ्रान्सका लागि कूल ३९ खेलबाट १६ गोल मात्रै गरेका छन् । तर, हल्यान्डले नर्वेका लागि ६ खेलबाट ७ गोल गरेका छन् । क्लबमा जस्तै राष्ट्रिय टिममा पनि एमबाप्पेभन्दा हल्यान्ड अगाडि रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
प्रकाशित मिति ७ चैत्र २०७७, शनिबार ०६:४३